5 Bogagga ugu Wanaagsan ee loogu Degsado Ciyaaraha kombiyuutarka | Golaha Moobaylka
Waqtigan xaadirka ah ee nolosha, qofna kuma fikirayo inuu dhaho cayaaraha fiidiyowga ma ahan kuwa ka mid ah qaybaha dhaqaajiya lacagta ugu badan, wax walbana, waxay soo jiitaan dad badan sanadba sanadka ka dambeeya. Qeybta ciyaarta fiidiyowga ayaa horay ugala wareegtay suuqyo kale ama warshado markasta hormuud ka ahaa xagga iibka, sida shineemo, muusig ama xitaa taleefanka gacanta ee dhanka midig. Waxaas oo dhan waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in jiilalka cusubi ay sii wadaan oo ay sii wadaan inay ciyaaraan iyo in barnaamijyadu ay sii kordhayaan Taasi waa sababta haddii aad tahay ciyaartoy madal PC ah Waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaato halka laga soo dejinayo ciyaaraha pc. Waxaad gaadhay maqaalka saxda ah.
10-ka kulan ee ugu eg Minecraft
In kasta oo hadda aan haysanno noocyo kala duwan oo konsol ah, sida Xbox Series X iyo S ama Playstation 5 ama xitaa Nintendo Switch weyn oo kala duwan, dhagaystayaasha PC-ga ayaa weli ah kuwa ugu badan oo ka mid ah kuwa ugu baahida badan goobaha ay adeegsadaan. inaad kala soo baxdo ciyaaraha kombuyuutarka. Sidaa darteed, qodobkan waxaan kahadleynaa barnaamijyadan kaladuwan ee aad kala soo bixi karto ciyaaro badan oo fiidiyoow ah taas oo aan u fahannay inay tahay barxaddaada ama taas oo aad xiisaynayso inaad ku ciyaarto xilligan aad akhrinaysid maqaalkan.
Sidaa darteed, haddii aad ka mid tahay kuwa ku soo biiray PC Master Race oo aad taas u malaynayso kombiyuutarkaaga waxaad kaheli doontaa khibrad ciyaareed oo wanaagsan marka loo eego konsol, maaddaama aad haysatid gabal PC ah oo leh qalabkii ugu dambeeyay, joog oo akhri tuducyada soo socda maxaa yeelay waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaato dhammaan barnaamijyadan si aad uga faa'iideysato PC-gaas weyn ee aad naga aqrisay. Waxaan halkaas u aadnaa websaydhada ugu fiican ama dhufto ee aan kala soo dagsan karno ciyaaraha kombiyuutarka.
1 Halkee lagala soo bixi karaa ciyaaraha pc? Meelaha ciyaarta fiidiyowga ugu fiican ee kombuyuutarka
1.3 Goobta dagaalka
1.5 Ciyaaraha Daadad
Halkee lagala soo bixi karaa ciyaaraha pc? Meelaha ciyaarta fiidiyowga ugu fiican ee kombuyuutarka
Waxay u badan tahay, inaad horeyba u ogayd Steam haddii aad tahay gamer weyn oo PC ah, laakiin haddii aan qiimeyn ku sameyno websaydhada ama barnaamijyada ugu fiican, Steam ma maqnaan karo markay tahay PC. Barxadda ciyaarta fiidiyowga ee loo yaqaan 'Steam video game' waxay dib u dhalatay 2003, oo ay abuurtay shirkad kale oo waaweyn oo loo yaqaan 'Valve Corporation' (haa, hal-abuurayaasha Nolosha Half 1 iyo 2 ee wali haysta 3 na sugaya muddadaas dheer, kuwa isku mid ah).
Valve, marka lagu daro Nolosha Badhka, ayaa sidoo kale soo saartay dhagaxyo ka mid ah kuwa ugu caansan ciyaaraha fiidiyowga ee taariikhda ciyaaraha fiidiyowga iyo soo dejinta, Weerarka Counter, sidoo kale loo yaqaan CS: GO ama mid ka mid ah ciyaaraha fiidiyowga ee ugu qosolka badan ee aan ku ciyaaray qaab wadashaqeyn saaxiibbaday, Bidix 4 Dhimasho (galab weyn oo galabnimo dishay zombies wax alla wixii aad gacanta ku haysay)
Steam waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee fiidiyoowga fiidiyoowga ah ee loogu talagalay adduunka oo dhan mana aha wax ka yar, maadaama maktabaddeeda ay ku leedahay dhammaan noocyada ciyaaraha fiidiyowga iyo noocyada. Waxaad sidoo kale ku haysataa in ka badan 20 luqadood. Maktabadda weyn ee fiidiyoowga ah ee 'Steam' gudaheeda waxaad ka heli kartaa cinwaano badan oo xiiso leh, haa, inta badan waa la bixiyaa. Laakiin ha niyad jabin, iyaguna waxay leeyihiin qayb Ciyaar bilaash ah Taas oo hadaad raadiso, waxaad kaheli kartaa xoogaa farxad kale ah qaab madadaalo ciyaarta fiidiyaha ah.
10-ta kulan ee istiraatiijiyadeed ee ugufiican PC
Steam kuma istaago halkaas maadaama shirkad ahaan ay u shaqeyso lana shaqeyso dadka kale, sida bulshada Ciyaaraha Bilaashka Ah Ayaa Siiya Wadooyinka. Barxadani waxay bixisaa kumanaan iyo kumanaan ciyaarood, mararka qaarkood wakhti xaddidan oo ku saabsan degelkeeda, kuwa kale maahan, waa inaad feejignaataa maxaa yeelay haddii wax moodo u yihiin Steam waa inaad yeelato maktabad aad u ballaaran (ka dibna marwalba aad u ciyaarto isla 3 ciyaaraha had iyo jeer, wax walba waa in la sheegaa).
Ka sokow tan iyo ugu dambayn, Steam wuxuu leeyahay iibkiisa caanka ah taas oo xilliyado kala duwan, sida xagaaga, ay ka dhigeyso iib weyn shirkado badan oo fiidiyoow ah oo saddex ah oo aan dhammaanteen dooneyno Mararka kale, waxay sidoo kale yaraynaysaa ciyaaro badan oo fiidiyoow ah xilligana ha moogaanin hal, ku dar liiska rabitaankaaga oo la soco inaad iibsato oo aad kala soo baxdo ciyaarahaas kombuyuutarka. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah astaamaha ugu fiican ee fiidiyowga fiidiyowga PC-ga waana waajib in la soo dejiyo oo la galo waqti ka waqti si loo arko waxa lagu kariyey dalabyadeeda. Ha moogaanin oo soo dejiso Steam hadda.
Asalku waa barxad ay iska leedahay EA runtiina ku dhalatay in lala tartamo dhammaan awooda Steam. Sida Steam, waa madal qaybinta dhijitaalka ah ee iibsiga iyo soo degsashada ciyaaraha kombiyuutarka. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale kugula xiriiri doontaa asxaabtaada waxayna leedahay baasaabo ama rukhsado kala duwan oo aad ku bixin karto si aad uhesho dhamaan ciyaaraha fiidiyowga maalinta koowaad, sida Helitaanka Asalka
Waxaa laga sheegaa asalka in (sida Steam, wax walba waa in la sheegaa) ay tahay mid ka mid ah meelaha ugu fiican uguna wanaagsan, ugu amniga badan, inaad ka iibsato ciyaaraha fiidiyow ee kombuyuutarka Dhexdeeda (waxay ku sii socotaa ku dayashada astaamaha uumiga) waxaad ka heli doontaa suurtagalnimada inaad ku darto saaxiibbadaa, hayso liistada xiriirada si aad u aragto waxa ay ciyaarayaan iyo haddii ay isku xiran yihiin, abuuro astaantaada oo la sheekeyso asxaabtaada kahor, inta lagu jiro iyo ka dib ciyaarta wax kasta.
Ma waxaad tahay taageere Blizzard iyo cayaaraha fiidiyowga? Tani waa goobtaada. Battle net waa barta loo yaqaan 'Activision Blizzard' halkaasoo aad ka heli doontid dhammaan ciyaaraha fiidiyowga si aad u iibsato oo aad u soo dejiso dijitaal ahaan. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa waxyaabo caan ah sida Warcraft 3, World of Warcraft, Starcraft, Hearthstone, Diablo ... Dhammaantoodna waxay ku jiraan noocyadooda kala duwan.
Iibsiga Blizzard ee loo yaqaan 'Activision', ciyaaraha fiidiyowga ee kala duwan ee ka socda 'Activision' ayaa lagu soo kordhiyay barxadda, sida Wicitaanka Waajibaadka ama Shilka Bandicoot. Sidaa darteed, haddii aad taageersan tahay sagaas, sidoo kale waxaad ka heli doontaa halkan. Wax war ah oo ka soo baxa Blizzard waxaad ka heli doontaa Battle net.
Haddii waxa aad raadineyso ay tahay inaad kala soo baxdo ciyaaraha kombuyuutarka oo waliba bilaash ah, halkan waxaad ka helaysaa ciyaaraha fiidiyowga ee ugu wanaagsan ee TCG, ama wixii la mid ah, kaarka fiidiyowga kaarka ugu fiican ee suuqa, ama ugu yaraan, ugu ciyaar badan (si loo ixtiraamo taageerayaasha Sixirka), Hearthstone.
Illaa iyo hadda waxaan ka hadalnay bogag leh rukhsado ay tahay inaad ku bixisid ciyaarta fiidiyowga oo dhammaystiran ama qiimo dhimis ah, laakiin dhammaantood si sharci ah. Waxaan had iyo jeer kugu dhiirigelinaynaa inaad ka iibsato barnaamijyadan, maaddaama aysan fayras lahayn, waxaad taageertaa horumariyeha abuuray ciyaarta fiidiyowga iyo wixii ka sarreeya, waa sharci waxna kuguma dhici doonaan. Hadda, haddii aad xiisaynayso, waxaan ka hadlaynaa degel kale laakiin markan si aad ugu soo dejiso ciyaaraha fiidiyowga kombuyuutarka bilaash.
Compucali tv waa mid kamid ah websaydhada ugu caansan ee soo dejista ciyaaraha si bilaash ah. Sida aad ku arkeyso sawirka, waa bog aad ufudud oo markii aad gasho aad isku aragto waji ka waji kulan video ah oo aad soo dejiso (liisan la'aan, xusuusnow). Marka lagu daro maadadan waxaad sidoo kale ka heli kartaa noocyada kale ee ka kooban sida taxanaha aad ugu jeceshahay, filimada aad aadka u dooneysay ama xitaa muujineyso inaad daba socoto (sidoo kale liisan la'aan rasmi ah).
Sida aad sidoo kale ku arki karto sawirka, waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad daalacatid shabakadda ama gujiso menu-keeda oo amraya cayaaraha fiidiyoowga alifbeet ahaan. Sidan oo kale, way kuu fududaan doontaa inaad ogaato inay leeyihiin ciyaarta fiidiyowga ah ee aad raadineyso ama haddii aysan weli sudhin. Ciyaar kasta oo aad gasho waxaa ku jiri doona kaar kaas oo sharraxaad kooban laga bixin doono iyo dhammaan shuruudaha ugu yar ee aad ugu baahan tahay kombuyuutarkaaga si aad ugu ciyaari karto sifiican. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, degelkan wuxuu ku siinayaa noocyo kala duwan oo ciyaar kasta oo fiidiyow ah si aad u soo dejiso ciyaaraha PC-ga aad jeceshahay.
Sida tii hore, boggan kama heli doontid ciyaaro badan oo fiidiyow ah oo lacag la siiyay, waad ogtahay. Ciyaaraha Torrents waxay ku siinayaan xaddi aad u tiro badan oo ah soo dejinta ciyaarta fiidiyowga oo qaab qaab ah u socda, Sida magaceeda ka muuqata. Sidii horeba u dhacday, isdhexgalkeedu waa mid aad u fudud oo isla markiiba waxaad ka heli doontaa warka shabakadda. Liiska sare, sida aad ku arki karto sawirka, waxaad ka heli doontaa aaladda ciyaarta fiidiyowga si aad toos ugu aaddid iyaga si aad u hesho iyaga goor dhow.
Xusuusnow inaan marwalba kugula talineyno inaad iibsato cayaaraha fiidiyowga si rasmi ah qeybiyeyaashooda iyo wixii ka sarreeya, waa inaan taageernaa shaqada kuwa horumarineed. Noogu sheeg faallooyinka waa maxay websaydhka ama madal aad u isticmaasho inaad kala soo baxdo ciyaaraha kombuyuutarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » 5 Bogagga ugu Wanaagsan ee loogu Degsado Ciyaaraha kombuyuutarka
YouTube aniga ima shaqeynayo: maxaa khaldan iyo sidee loo hagaajiyaa?
Muxuu Windows 10 u damin doonin iyo sidee lagu gaaraa?